APPLE TREE WELSEY - ORCHARD APPLE
Haddii aad rabto inaad haysatid noocyo kala duwan oo jiilaal ah oo tufaax ah oo ku yaal beertaada oo fiicnaan doona oo kaliya muuqaalka, laakiin sidoo kale dhadhanka, isla markaana waxay leeyihiin sifooyin wanaagsan oo kale, ka dibna waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa Welsey kala duwan.
Waa lagama yaabo inaadan waligeed arkeynin tufaaxan quruxda leh, oo soo jiidata muuqaalkiisa oo si fudud "miiskaaga" ku weydiisato miiskaaga, dambiil miro. Midhaha wuxuu leeyahay midab qurux badan oo qurux badan, mid xitaa wuxuu dhihi karaa, midab casaan ah, laakiin sidoo kale waxaa jira miraha midab yar, ka dibna midabka huruudka-cagaaran oo leh shaashad iftiin leh oo u muuqata in loo jeedo.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka of tufaax
Qaababka tufaaxu waa wareegsan, laakiin wax yar ayay ku xiran tahay jihada xuddunta, qiyaasta waxay gaari kartaa 150 garaam. Waxay leedahay caraf udgoon, hilib casiir leh iyo dhadhan-macaan.
Maqaarka midhihiisa ma aha mid qaro weyn, qolalka qoryuhu waa yar yihiin. Shaki iigama jiro in muuqaalka tufaaxan uu kaa dhigayo inaad tijaabiso. Waqtiga saarista waxay kuxirantahay xaaladaha cimilada iyo gobolka (inta badan qeybta labaad ee bisha Sebtembar ama bilowgii Oktoobar).
Sida for qoryaha, kuma kala duwanaan wayn. Ugu horreyntii waxay leedahay taajkii girgirta, ka dibna wuxuu bilaabaa inuu muujiyo wareegsan. Laamihii geedku wuxuu kor u eegi karaa, xagal xummad, taas oo aan fiicnayn, sababtoo ah hadhuudh wanaagsan, taasi badanaa waxay keenaysaa inay jabaan. Laakiin talooyinka laanta yar ee hoos u dhaca hoos u dhig oo muuqaal muuqaal ah.
Caleemaha ma aha mid qaro, brown midab, oo leh pubescence yar. Leaves waxay leeyihiin geesaha waraaqaha iyo lakabka sare ee ugu sareeya. Isla mar ahaantaana waxay leeyihiin iftiin muuqata oo ka soo horjeeda asalka midabka cagaarka madow. Goobta ay ku xiran tahay baxsashada waa ku dhowaad 90º. Inta lagu jiro xilliga ubax, geedka ayaa ku faraxsan isha oo leh burcad qurux badan iyo burooyinkeeda cad, kuwaas oo ubaxyada dambe ee cabbirka dhexdhexaad ah u muuqdaan midab isku mid ah.
"Faa'iido" Kala duwanaanshahan waa:
Xaqiijinta (miraha ugu horeeya waxaa laga filan karaa sanadka afaraad);
- muuqaalka iyo xajmiga midhaha, wax soo jiidashada badeecada;
- ma ahan lagama maarmaan in la sugo Bisaylkiisa midhaha, waa la wada baabbi'in karaa isla markiiba ka dib qaadista;
- Haysashada waxtarka sare ee fasalka (ilaa 200 kg);
- nolol caadi ah oo dheeraadka ah (oo ka sarreeya kuwa Antonovka caanka ah, iyo Janaayo waxaad weli ku raaxaysan kartaa dhadhanka tufaaxa);
- iska caabbinta cudurrada, gaar ahaan si ay u neefsadaan;
In kastoo, iyo hooseeyaa, laakiin weli, celceliska iska caabinta u dhaxeyso (oo ah noocyo farabadan waa mid aad u hooseeya).
Waa labadii dhibcood ee ugu dambeeyay ee si fiican u kala soocay noocyada kala duwan ee indhahana, waxayna noqotay qaabka asalka u ah dhalashada noocyo badan oo caan ah, waxaana jira qiyaastii soddon.
"Negative" waxaa lagu magacaabi karaa xaqiiqda ah in midhaha ay u janjeedhaan in ay hore u dhacaan iyo haddii aad iska indho tirto, waxaad lumin kartaa qayb muhiim ah oo dalagga ah; dhimista [/ size of miro leh dhalidda wanaagsan.
Hal dheeraad ah muuqaal Kala duwanaantan, taas oo u ogolaanaysa inuu si buuxda ugu dhameeyo subclause oo leh cillado, waa ficilnimada dhadhanka miro, iyadoo ku xiran cimilada. Haddii xagaaga uu ahaa mid aad u badan oo qabow, markaas waxay si dhab ah u saameyn doontaa dhadhanka tufaaxa ee ka xun.
Soo saarista. Waqtiga.
Iyada oo heer sare ah oo dhacaya biyaha dhulka, waa in marka hore la siiyo mudnaanta koowaad (gawaarida), haddii kale geedka waxaa lagu dabooli doonaa kor-u-kicid. Dabcan, xaaladdan geedka laguma kala saari doono wax-soosaarka sare iyo muddada dheer. Haddii heerka biyuhu uu yahay meel qoto dheer oo ah 2.5 m, ka dibna sariiro semiar ah ayaa ku habboon.
Geedkani wuxuu ku noolaan doonaa in ka badan 40 sano, laakiin, nasiib daro, dhalidda ay sidoo kale ma gaari doonaa waxqabadka ugu sareeya. Oo kaliya dhacdada biyaha ee qoto dheer ee saddex mitir ama ka badan ayaa kuu ogolaanaya inaad isticmaasho wax stock, xitaa haddii ay leedahay nidaam xidid adag.
Laguma sheegi karo in ay jiraan sirro gaar ah oo loo baahan yahay in la isticmaalo marka la beero iyo daryeelidda noocyo kala duwan. Sida geedka kale ee tufaaxa ah, Welsey waa in la beeray xilliga dayrta ama bilowga guga.
Goobta Geedka tufaaxa Welsey wuxuu jecel yahay in uu iftiimiyo, laakiin aan lahayn qorraxda qorraxda, haddii kale halista geedka khatarta gubashada. Ku dhow waxaa lagu talinayaa in la soo saaro pollinators apple, ka dibna beergooyska noqon doonaa ka badan. Noocyada noocaan ah sida Macintosh iyo Antonovka.
Mid ka mid ma aha in ay iloobaan qorshaha guud ee geedaha tufaaxa iyo in la xusuusto in doorashada ah ee seedling ay ku xiran tahay heerka biyaha, iyo, si kaamil ah, kaas oo uu rootstock (darajada, semi-saafi).
Ciid waa inuu loamy iyo bac. Sida noocyo kale oo tufaax ah, waa in la helaa hawo fiican oo hawo leh. Si arrintan loo sameeyo, waxay ku xiran tahay isbedelka lagama maarmaanka ah, iyada oo la hirgelinayo dhammaan wixii lagama maarmaanka u ah (peat, sand, iwm), iyadoo ku xiran baahida.
Xaaladaha degsiimada isla sidii markii la beero geedo tufaax ah. Pit 70 cm (qoto dheer) halkii 100 cm (dhexroor). Kala saar bacaha iyo bacaha soo socda, si aanay u qasin.
Bartamaha waxaan ka dhignaa hillock ka soo lakabka bacrin ah, ku dar humus iyo superphosphate, qaso, waxaad ku dari kartaa ash. U hubso inaad godka ku riddo godka, taas oo aan ku xirno seedling noo. Goobta si fiican u daadi biyaha iyo ilaa biyaha la nuugo. Peat ku wareegsan qandhada.
Sidoo kale beerto, marxaladani kama duwana mabaadi'da guud ee daryeelka ee tufaax kale. Waraabinta waxay kuxirantahay cimilada. Xaaladaha qallalan, biyaha ugu yaraan hal mar toddobaadkii iyo badh. Geed yar wuxuu u baahan yahay qadar biyo, kaas oo noqon doona qiyaastii shan iyo labaatan litir.
Waxaa haboon inay dib u soo celiso faa'iidooyinka dhirta oo idil, oo ay ku jiraan laanta. Tani waxay noqon doontaa dariiq dheeraad ah oo lagu xakamaynayo cayayaanka, guud ahaanna waxay saameyn ku yeelan doontaa geedka. Kaliya ha ilaawin in tani ay tahay in la sameeyo fiidkii, si aanay u waxyeeleynin seedling iyo iska ilaali qoraxdu.
Ha iloobin marxalad muhim ah sida ciid dabacsan. Gaar ahaan geedka wuxuu u baahan yahay ka dib roobab culus iyo mid dheer. Sidaa darteed, iyadoo taxadar leh, oo aan si qoto dheer u dhex galin, cirbadaha ayaa la ganaaxay. Nidaamkani wuxuu kordhin doonaa helitaanka hawada ee nidaamka asaasiga ah waxayna ka faa'iideysan doonaan geedka tufaaxaaga.
Gooyo sidoo kale waa lagama maarmaan. Marka da'da hore, dabeecadda midhaha kala duwan ee noocaan ah waa dabacsanaan. Mar walba waxaa jira khatarta ah in laamiyada culeyska la saaro miraha. Maaddaama ay da'diisu tahay, geedka wuxuu u socdaa nooca loo yaqaan "fruiting" oo kale, waxaana jira dhibaatooyin sida xilliyada loo yaqaan "periodicity". Manjada khatarta ah waxay caawineysaa in yar si sax ah loo saxo khalkhalkaas.
Bacriminta iyo quudinta geedku waa lagama maarmaan marxalado dhowr ah. Ka hor inta geedka "toosan", inta lagu guda jiro ubax iyo ka dib. Warshadu waxay u baahan tahay Bacriminta dabiiciga ah iyo kuwa yaryar. Sida aad ogtahay, geedo tufaax ah si fiican u dulqaadan oo jecel xalka HOL. Waxaa intaa dheer, waxaa loo isticmaali karaa sida quudinta foliar, qaabka lagu buufiyo.
Balse xusuusnow in ay muhiim tahay in si habboon loo nadiifiyo walaxkan biyo biyo ku filan. Geedka weyn ee geedka, waxay u badan tahay in la bedelo, laakiin, si kastaba ha ahaatee, waxay noqon doontaa mid waxtar leh si loo tijaabiyo xalka laan gaar ah, oo ay u fiirsato falcelinteeda laba maalmood.
Waxtar leh sidoo kale isticmaalka ash alwaax iyo mullein buufin. Bannaanka u badan waxay la qabsadaan quudinta xagaaga. Muddadan, maadooyinka nitrogen-ku jira ayaa hodan ku ah fosfooraska iyo potassium.
Jiilaalku maaha mid aad u xun tan noocyada dhirta tufaaxa ah, laakiin tan iyo waayidda jiilaalka ayaa lagu gartaa celcelis ahaan, hoos u dhigga heerkulka -25º wuxuu yeelan karaa saameyn waxyeello geedka. Sidaa darteed, seedling waxaa ugu wanaagsan ee la xidhay laamood iyo geedo ku dhow jirridda digada mulch. Geedka weyni kuma fillaawo kuleylka leh dhejinta.
Ka mid ah cudurrada beerta inta badan cabsan, in meesha ugu horeysa waa qolof. Oo halkan waxaad ku neefsan kartaa niyadjab, maxaa yeelay waxaan hore u sheegnay in kala duwanaanta noocaani ay tahay mid ujeedadiisu tahay sababtoo ah waxay ka soo horjeeda cudurkan, taas oo ah jajabiyayaal u isticmaalaan inay u bedelaan muuqaalkan noocyo cusub.
Laakiin waxaa jira cuduro kale iyo cayayaanka oo keeni kara waxyeelo weyn oo geedka, gaar ahaan haddii geedo kale oo geedo kale u soo baxaan.
Xusuuso waxa ku saabsancudurada waaweynKuwa ugu caansan waa: kalluunka miraha, xayrta maqaarka, cytosporosis. Iyo sidoo kale cayayaankaKuwa ugu caansan waa: gadhka iyo aboorka qulqulaya. Dhibaatooyinkaas oo dhan waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato. Waxaa jira daroogooyin badan oo u nugul hawo-mareenada qaarkood.
Waxa ugu muhiimsan - u hoggaansamaan shuruucda isticmaalkooda iyo ha ilaawin xeerarka guud ee la xidhiidha dhirta. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la daryeelo beerta dayrta, raking iyo gubi caleemo qalalan, taas oo cayayaanka badan oo inta badan isku dayaan in ay qariyaan jiilaalka.
Guud ahaan, haddii aad raacdo xeerarka aasaasiga ah ee daryeellidda dhirta oo ku hareeraysan daryeelka iyo jacaylka, waxaad mar walba ku xisaabtami kartaa isku-dhafidooda, oo ah qaab beereed wanaagsan, waxay noqoneysaa geedka tufaaxa ee Welsey ama wax kale, waxaana ku rajeyneynaa inaad ku guulaysato arrintan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Orchard Apple 2019